डा. करुणा कुँवर - १४ वर्षकी बालिका जो विद्यालयमा परीक्षा आयो कि बेहोस हुन्छिन्, बर्बराउँछिन्, रुन्छिन्, परीक्षा दिन जान मान्दिनन् । तर अभिभावकले ती बालिकालाई जस्तो आउँछ, त्यस्तै गर बरु फेल भए पनि केही हुँदैन भनेर सम्झाएका छन् । अभिभावकले बालिकालाई समर्थन गरेको जस्तो लाग्छ, बालिकालाई सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ । तर बालिकाले यसलाई सहज रुपमा लिँदिनन् । उनी झन् आत्तिन्छिन् ।...
अनि हामी झनै जवान भएर फर्कियौँ
ऋग्वेद शर्मा – हिँड्दा हिँड्दै थच्च बस्न पाइयोस् । भेटेका कुरा कप्प खान पाइयोस् । अल्छि लागे सुत्न पाइयोस् । खुशी मानेर दौडन पाइयोस् । पैतलाले जहाँ मन लाग्छ टेक्न पाओस् । आँखाले जे मन लाग्छ देख्न पाओस् । यसो नगर भन्ने कोही नहोस् । यसो गर भन्ने कोही नहोस् । चिठ्ठा परेर नसोचेको खुशी भेटिएजस्तो ‘गैएला र !’ भनेको ठाउँमा पुग्दा के गरौँ कसो गरौँको तालमा बुर्लुक्क...
जापानको कृषिबाट नेपालले सिक्न सक्ने कुरा
बर्षेनी हजारौ नेपाली युवा रोजगारका निम्ति विदेश राष्ट्रमा जाने गरेका छन् । धेरै नेपाली युवाको गन्तब्य बन्ने अर्को राष्ट्र हो जापान मिैले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको कृषि पढ्ने विधार्थीबीच भएको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जापान जाने मौका पाएको थिएँ । असोज ३ देखि १० गते सम्म एक हाप्ताको सम्मेलनमा जापानको कृषिलाई प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव एवं अवलोकन गर्ने मौका...
पोखरामा साक्षात देवी
डा. नवराज खतिवडा काठमाडाैं, असोज २८ - नेपाली नारीको औसत उचाई भन्दा अग्लो कद । कदको धारणशक्ति अनुरुप जत्रो आकारको देखिँदा शौन्दर्यको चरम बिन्दु छुन्छ त्यत्रै जिउडाल । कालो रंगको कोट र पाईन्ट मिश्रित औपचारिक पहिरन । कोटको शिरान तिरका खुलै छोडिएकाले टाँकले छातीमा 'भि' आकारको डिजाईन बनाएका । वाह्य आवरणको त्यो आकर्षक डिजाइनले उघारेको भु-भाग छोप्न सेतो रंगको भित्री ।...
‘छक्का पञ्जा २’ किन भयो टाउको दुखाई ?
दीपेन्द्र खनिया – हरेक सिनेमा यो काल्पनिक कथामा आधारित छ भनेर सुरु हुन्छ । त्यो भन्दा अघि सिनेमा सम्बन्धी नियमनकारी निकाय सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र सेन्सर बोर्डले चलचित्र हेर्छ । कानुनले बन्देज गरेको कुरा भए त्यसलाई काट्छ । समाजमा द्वेष, भ्रम वा विकृती फैलाउने कुरा भए त्यसलाई रोक्छ । हैन भने सिनेमाको कथा र दृश्य अनुसार ग्रेड छुट्याएर प्रमाणपत्र ...
दुर्गा कार्की प्रिय दीपकजी र दीपाजी, नमस्कार! सन्चो-विसन्चो सोधेर लोकाचार पार्न थाल्दिनँ। हिजो छक्का पन्जा २ नामको सवा दुई घण्टे ‘हास्य टेलिश्रृंखला’ हेरेर आएदेखि दीपकजीसित फेरि रिस उठेको छ, दीपाजीसित चित्त दुखेको छ। यसो गरौं, पहिले रिसै शान्त पारौँ। चित्त दुखाउनेहरूको त यो संसारमा यसै पनि हिसाबकिताब छैन। त्यसमा पछि आउँला। दीपकजी, सुरुमै...
पुरञ्जन आचार्य – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अप्रत्यासित हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जुन गठबन्धन थियो र दुवै सरकारमा थिए । जसका कारण कांग्रेसको लागि यो ठूलै अचम्म भयो होला । तर देशको ऐतिहासिक क्रमबाट हेर्दा, वाम आन्दोलनलाई हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ईतिहास पल्टाउँदा यस्ता एलाइन्स भईरहेकै छन् । अहिले दुई वटा निर्वाचनका अगाडि...
तेस्रो चरणको चुनावपछिको संकेत
प्रकाश ढकाल काठमाडौं, असोज २ – २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावसँगै संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक कार्यदिशाको बाटो थप फराकिलो बन्दैछ । राजपाको सहभागिता नै तेस्रो चरणको चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । आफ्नो मागअनुसार संविधान संशोधन नभई संविधान स्वीकार नगर्ने र कुनै पनि चुनावमा भाग नलिने अडानमा रहेको राजपा संविधान संशोधन हुन...
जसले आफ्नै बलबुतामा संविधानको उल्था गरे !
विनय गुरागाईं - झन्डै डेढवर्ष अघि एकदिन मित्र एकराज चौधरीले कुरा चुहाउनु भयो, 'मैले नेपालको संविधान थारु भाषामा उल्था गर्ने विचार गरे।' एकजना रेडियोकर्मी जसलाई म जहिले भेट्थे बिहानदेखि बेलुकासम्म रेडियो स्टेशनमै व्यस्त रहेको पाउँथे । त्यसैले मैले चौधरीको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइन । नलिनु पर्ने अरु पनि कारण थिए मसँग । नेपालको नयाँ संविधानप्रति थारु समुदाय...
माइक्रोबसमा देखिएको परदेशीका प्रेम
सन्जिता देवकोटा पहिलोपटक म एक्लै लामो यात्रामा निस्केको थिएँ । परदेशीका अनुभव बटुल्न काठमाडौंबाट सुनसरी निस्कँदै गर्दा उत्साहित पनि थिएँ ।‘ल है ४३८९ आइपुग्यो । पुलमुनी छ, छिटोछिटो गएर चढिहाल्नुस है’ ४३८९ नम्बरको माइक्रोबसका सहचालक परैबाट चिच्याउँदै साकिरा माइक्रोबसको काउन्टरमा आए । अघिल्लो दिन टिकट काट्न जाँदा ६ बजे नै कोटेश्वर आइपुग्नु भनेका थिए । त्यसैले...
सामिप्यता, कनेक्टिभिटी र विकास (भाग २)
विनोद न्यौपाने – अलिकति, प्रसङ्गलाई बसाईँसराईँतिर लगेर सामिप्यता र कनेक्टिभिटी हेराैँ ? धेरै साथीहरुले प्रश्न उठाइरहनुभएको छ, धेरै मान्छे पहाडबाट तराई, आसाम बर्मातिर बसाईँसराईँ गरे । तर के थियो त कारण तराईका मान्छे पहाड बसाईँसराईँ गएनन् । यो प्रश्न गरिबीको साथै सामिप्यता र कनेक्टिभिटीसँग जोडिएर आउँछ । बसाईँसराईँमा पनि कहाँ सर्ने, धर्म, आफ्नो संस्कार, वर्ग, जातजाति,...
सामिप्यता, कनेक्टिभिटी र विकास (भाग १)
विनोद न्यौपाने - कर्णालीमा बाटो पुग्दा भुइँमै खुट्टा छैन मायालुलाई भेट्न जाँदा कुनै चिन्ता छैन झल्को लाली ओठको ।। बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला कालिकोटको ।। आँखा देख्ने भए पनि साँच्चै भाथ्यौ अन्धा, हाम्लाई मोटर ठूलो सिंहदरबार भन्दा ।। झल्को लाली ओठको ।। लोकलयका यी हरफले हामीलाई मनोरञ्जन दिने काम मात्रै गर्दैनन्, हाम्रो समाजको राजनीतिक, आर्थिक तथा...
घरभित्र सर्पको १८ घण्टे बास, परिवारलाई त्रास
सुजाता खत्री - ‘ए आम्मा, यहाँ सर्प रैछ !’ आमा आत्तिदै चिच्याउनुभयो । म दगुरेर आमा नजिकै पुगेँ । एउटा हातमा पानी तान्ने पम्प र अर्को हातमा चियाको गिलास समातेकी आमा फ्या फ्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो । सर्प देख्दा आत्तिएर होला चिया पनि पोख्नुभएछ । ‘कहाँ निर हो ?’ मैले सोधेँ । फूलदानी देखाउँदै आमाले भन्नुभयो ‘त्यहाँ छ ।’ फलामको पाताको दुई तह भएको र्‍याकमा धेरै...
शल्यक्रियाका लागि वर्ष दिन कुर्नुपर्ने अवस्था हटाऊ
काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रियाका लागि बिरामीले करिब एक वर्ष पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । केही शल्यक्रियाका लागि कान्ति र शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एक वर्ष; वीर, सहिद गंगालाल र पाटन अस्पतालमा करिब ६ महिना र निजामती अस्पतालमा तीन महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने वाध्यतामा छ । ती अस्पतालमा अलि नाम चलेका र बिरामीको रोजाइमा पर्ने सर्जनसँग शल्यक्रिया...